Cybercafepfo - MYSTERY ZILLION
September 2009 edited November 2009 in Internet & Email
အကို တို. အမ တို.ရေ Cybercafe Pro version 5.2.120 လေးလိုချင် လို.ပါ။ crack လေးဒါမ မဟုတ် keygen လေးပါ လိုချင်လို.ပါ။:D
အဲဒီမှာ တစ်ချက်ရှာကြည့်လိုက်.. အောက်ဆုံးမှာ Cyber Cafe သုံးတဲ့ဆော့ဖ်၀ဲတွေ တင်ပေးထားပါတယ် Cybercafe Pro လည်းပါပါတယ်..(version ကတော့ မသိဘူး) ဒါပေမဲ့ .. ဆာဗာအတွက်ပါ .. Client အတွက်ပါ .. သုံးပုံသုံးနည်းများကို ebook နှင့်တကွ တင်ပေးထားပါတယ်.. အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှျော်လင့်မိပါတယ်..
အကိုရေ..ဒီလင့်လေးမှာလည်း..တစ်ချက်ကြည် ့လိုက်ပါအုံးခင်ဗျ။ ။
အကိုရေ www.crackspider.net မှာရှာကြည့်ပါလား အရင်version 5.0တုန်းကတော့အဲ့ဒီမှာရှိ
cybercafe pro ver5.250 ကို ယူချင်ရင်တော့
အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဗျို ့အနော်ဆီမှာတော့ အကိုပြောတဲ့ version ကနောက်ဆုံးထွက်ထင်တယ်မတွေ ့သေးဘူးဗျ
ကျနော်လည်း cybercafepro 5.2.120 ကို လိုချင်လို့ပါ...ခင်ဗျာ...:106: